Ixabiso likaBaron Corbin lixabise ntoni? - Wwe
Ixabiso likaBaron Corbin lixabise ntoni?
Omnye wezona zinto zincinci zithethwayo malunga nale veki yeSmackDown- eyabona abalandeli bebuya- yayinguBaron Corbin ecela iminikelo kwi-WWE Universe ukumnceda.
UKevin Owens waphazamisa uBaron Corbin kwaye wammangalisa, evelisa ipapa evela kwi-WWE Universe. Kubonakala ngathi iWWE izakuqhubela phambili ngeBaron Corbin gimmick ehluphekileyo. Baye benza nomzamo ukwakha iphepha 'leCorbin Me' leBaron Corbin .
Lo mlingiswa weBaron Corbin uyonwabisa kakhulu #Ismack down pic.twitter.com/BHJdyyV5Wc
-Iimbono zeWrestle (@TheWrestleViews) Julayi 17, 2021
Kulabo bangakhange balandele imveliso yeWWE kutshanje, uBaron Corbin uphumelele uKing weRing tumente kwi2019 ukuba abe nguKing Corbin. Ukuhlala enyanisekile ku-King gimmick wakhe we-heelish, u-Baron Corbin wajika kwiRolex yakhe yexabiso kunye neemoto zodidi. Wachaza ukuba akukho mlandeli onokulingana nenqanaba lobunewunewu awayebunandipha ebomini bakhe.
Nangona kunjalo, uCorbin uphulukene nesithsaba sakhe nguShinsuke Nakamura kutshanje, kwaye izinto bezisehla okomntu owayesakuba nguMnumzana Imali kwiBhanki ukusukela ngoko. Ngenxa yobume be-gimmick kaBaron Corbin, abalandeli bayazibuza ukuba ingaba uCorbin uhlwempuzekile nakubomi bokwenyani. Oku kunjalo ngakumbi xa umntu ejonga inyani yokuba ezinye abalandeli abathembekileyo baqale iphulo leGo Go Fund Me likaBaron Corbin .
Akukho lusizi @BaronCorbinWWE isuka e @WWEUniverse ! #Ismack down pic.twitter.com/BsuOFNTqJI
-WWE (@WWE) Julayi 17, 2021
UBaron Corbin njengoKumkani uCorbin
Njengoko kuchazwe ngaphambili kwi-SportsKeeda , IBaron Corbin ifumana i-285,000 yeedola ngonyaka kwaye inamahemuhemu okuba inexabiso elifanelekileyo le-2 yezigidi zeedola. Ngelixa kungekho ngxelo iqinisekisiweyo ngokubhekisele kwinto enye, eli nani liyakholeleka, ngenxa yokuba umvuzo we-285,000 yeedola kwisithuba seminyaka emihlanu wenza ukuba ixabiso lakhe lifikelele kwi-1.425 yezigidi zeedola, ngaphandle kwezinye izinto zakhe.
I-WWE iye yafaka uphawu lwentengiso ku-Happy Corbin, enokuba sisalathiso sexesha elizayo likaBaron Corbin. Ndikunye noKevin Owens omangalisayo uBaron Corbin kutsha nje, owayesakuba yintshatsheli e-United States kungekudala enokubambana ne-Prizefighter. Ngelixa kusenokwothusa, ngaba singabona i-Million Dollar Champion LA Knight itsiba inqanawa ukusuka kwi-NXT ukuya eSmackDown ukuya kufuna iBaron Corbin?
Yintoni ongathanda ukuyibona xa uBaron Corbin ethatha, ngoku akasenguye uKumkani? Shiya izimvo zakho kwicandelo lamagqabaza!
Ndicinga ukuba ndiyamthanda
ungabinamona njani kwaye ungazithembi
ungayifumana njani imbeko kwakhona kubudlelwane
ungamnceda njani umntu okhalayo
lonke ixesha laseMelika 2 ukukhutshwa komhla wenetflix